Farmaajo: waxaan weerarnay saldhiga Alshabaab ee degmada Saakow - BBC News Somali
12 Juunyo 2017
Image caption Dagaalyahanada Alshabaab
War qoraal ah oo ka soo baxay dowlada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada gaarka ah ee dowlada Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ay weerar ku qaaden saldhig ay Alshabaab ku lahayeen meel u dhaw degmada Saakow ee gobolka Jubadda Dhexe.
Madaxweynaha dowlada federalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu amray weerarkan lagu qaaday saldhiga. Waxaana ay dowladu intaa ku dartay in saldhigani ay ku sugnayeen saraakiil sarsare oo katirsan Alshabaab.
Dowlada ayaa sidoo kale sheegtay in sameyn doonto dadaal walba oo lagu baajinayo khasaara soo gaaro shacabka, inta lagu guda jiro howgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ilaa iyo hadda majirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka Alshabaab, hasa yeshee wasaarada gashandhiga ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay weerarkani lagu qaaday Alshabaab ee Saakow. Waxaana uu Mareykanku sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada dowlada ay fuliyeen weerarka.
Madaxweyne Farmajo ayaa intii la doortay waxaa uu sheegay in uu ka shaqeyn doono amniga dalka, iyadoo dowlada federalka ay haatan Muqdisho ka wado barnaamijka xasilinta caasimadda.